Ciidamo Shacabka ka difaaca dhibaatada Nabad diidka oo la dejiyay inta u dhaxeyso Ceelasha Biyaha iyo Afgooye | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidamo Shacabka ka difaaca dhibaatada Nabad diidka oo la dejiyay inta u...
Ciidamo Shacabka ka difaaca dhibaatada Nabad diidka oo la dejiyay inta u dhaxeyso Ceelasha Biyaha iyo Afgooye
Muqdisho(SONNA);– Cutubyo ka tirsan Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la dejiyay inta u dhaxeyso deegaanka Ceelasha Biyaha iyo degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Ujeedka Ciidamadaan loo dejiyay halkaasi ayaa lagu sheegay iney tahay sidii ay uga hortagi lahaayeen dhibaatooyinka Kooxda Nabad diidka ay ka geystaan inta u dhaxeysa deegaanka Ceelasha Biyaha iyo degmada Afgooye ee Gobolkaasi.
Waxayna si gaar ah Ciidanka Xoogga dalka isha ugu heynayaan miinada Kooxda Argagixisada Al-Shabaab dhulka ku aasayaan taasi oo dhibaato ay ka soo gaarto dadka rayidka ah ee ku safraya wadada dheer ee xiriirisa Afgooye iyo magaalada Muqdisho iyo iney ka difaacaan weerarada gaadmada ah ee mararka qaar Al-Shabaab soo qaadaan.
Abaanduulaha Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal C/llaahi Cali Caanood oo Cudutyo ka tirsan Ciidamada Xooga dalka kula hadlayay goobta la dejiyay ayaa kula dardaarmay ineysan baari karin gaari dad shacab ah ay saaran yihiin lana hadlin karin shacabka,balse ay xil iska saaraan sidii dhibaatooyinka kooxaha nabad diidka halkaasi ka geystaan looga maareyn lahaa.
Wuxuu sheegay Generaal Caanood in marar badan dhegahooda ay ku soo dhaceen weeraro iyo falal kale oo lid ku ah amaanka iney Al-Shabaab ka geysteen inta u dhaxeysa Afgooye iyo deegaanka Ceelasha Biyaha garteenna iney arintaasi mar kale soo noqon.
Ururka Al-Shabaab ayaa dhowr jeer oo hore dad shacab siyaabooyin kala duwan ugu waxyeeleeyay halkaasi haba ugu badnaadaan waxyeelada shacabka ka soo gaarto miinooyinka sida hagarta ah ugu aasaan wadooyinka inta badan Shacabka ay adeegsadaan.
Previous articleUrurka Haweenka G/Banaadir oo deeq lacag ah u qeybiyay Ciidamada Amniga Muqdisho+(Sawirro)
Next articleQaramada Midoobay oo ku baaqday in si deg deg ah loo badbaadiyo 137-Carruur Suuriyaan ah